Maxay DF u doonaysa in si buuxda uusoo noqdo xiriirkii Kenya? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay DF u doonaysa in si buuxda uusoo noqdo xiriirkii Kenya?
Rooble ayaa doonaya inuu dib usoo nooleeyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya, isagoo qaadey tallaabooyin arintaasi ku saabsan oo labada dhinac ay soo dhaweeyeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in la sameeyo guddi isku dhaf ah oo ka shaqeeya in si buuxda dib loogu soo celinyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya.
"Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay mar kale xaqiijineysaa inay ka go'an tahay dib u soo celinta cilaaqaadka diblomaasiyadeed, ganacsiga iyo isku socodka bulshada labada dhinac, si loo gaaro barwaaqada iyo horumar dhaqaale," ayay wasaaraddu ku tiri warsaxaafadeed.
Wasaaradda waxay ku tilmaantay dib u furitaanka Kenya ee hawadeeda tallaabo wanaagsan oo muujinaysa inay labada dowladood ay diyaar u noqdeen inay kawada xaajoodaan khilaafka u dhaxeeya, islamarkaana ay xal deg deg ah u helaan.
Qoraalkan ayaa yimid saacado kadib markii Kenya ay qaaday xayiraaddii duulimaadka ee saarneyd Soomaaliya ku dhowaad bil qaadatay, waxaana muuqata inuu isbedelay mowqifka Uhuru maadaama uu Farmaajo xukunka wareejiyay.
DF ayaa dhinaceeda sheegtay in dib u furista hawada ay tahay tallaabo muhiim ah oo horay loogu qaaday hannaanka sare loogu qaadayo ganacsiga, isgaarsiinta iyo isu-socodka muwaadiniinta labada dal.
"Labada dal ee walaalaha ah waxay waligood iska kaashan jireen amniga, ganacsiga iyo xiriirka dhaqan ee wadajirka ah ee salka ku haya danaha guud, deris wanaaga iyo ixtiraamka madaxbanaanida siyaasadeed," ayay tiri wasaarada arrimaha dibadda Soomaaliya.
Maamulka Duulista Hawada ee Kenya ayaa joojiyay dhamaan duulimaadyadii aadi jiray iyo kuwii ka imaan jiray Soomaaliya 11-kii bishii May ee 2021 kadib markii Soomaaliya ay diiday in ay qaado xayiraadii lagu soo rogay 2020-ka duulimaadyada qaadka (Miraa).
Sababta ugu weyn ee hadda DF u doonayso inuu si buuxda kusoo laabto xiriirka Kenya ayaa ah in dalka uu doorasho aadayo, islamarkaana Rooble uu ka shaqeynayo inuu fareglinta dalalka deriska soo afjaro.